Apple waxay diiwaangelisay lix nooc oo cusub oo Apple Watch ah guddiga Eurasian | Wararka IPhone
Kariim Hmeidan | 03/08/2021 14:00 | Apple Watch
Wax ka yar hal bil ayaa nooga dhiman Muhiimada soo bandhigida aaladaha cusub ee Apple, muddo bil ah si aan u ogaano sida kuwa ka yimid Cupertino ay u doonayaan inay garaacaan tartamayaashooda ugu waaweyn, waxaanan horay idiinku sheegnay inaan yeelan doonno qalab nooc kasta leh. Xilliga xagaaga waxaan arki karnaa dhammaan noocyada beta ee nidaamyada hawlgalka Apple, laakiin sidoo kale waa waqtigii la baran lahaa dhammaan wararka xanta ah, iyo haa, waxyaabo badan ayaa la xaqiijinayaa wax badanna waa sax. Hadda waxaan hadda helnay macluumaadkaas Apple waxay hadda iska diiwaangelisay Apple Watch cusub oo aan ku arki doonno bisha Sebtember guddida Eurasian. Sii wad akhrinta aan ku siineyno dhammaan faahfaahinta.
Nidaam qasab ah Oo haddii ay hadda sameeyaan, waa sababta oo ah bilaabista aaladaha waxaa loo qorsheeyay bisha Sebtember sidii caadiga ahayd. Xaaladdan oo kale Apple ayaa rabtay iska diiwaangali lix nooc oo kala duwan oo Apple Watch ah keydka komishanka Eurasian. Maxay tani ka dhigan tahay? waa inaan xisaabta ku darsannaa in cabbir kasta oo Apple Watch uu yahay nooc ka duwan, sidaa darteed waxaan hubaal ahaan doonnaa inaan aragno laba nooc oo ah Apple Watch Series 7 (oo leh labadoodaba u dhigma), iyo Apple Watch SE, ama xanta Apple Watch ee ciyaaraha aadka u daran (oo leh labadeeda cabbir).
Oo kaliya maahan Apple Watch, oo ka yimid Cupertino waxay kaloo rabeen inay diiwaangeliyaan laba nooc oo cusub oo Mac ah taasi waxay xaqiijin doontaa wararka xanta ah ee ah dhammaadka sannadka Apple waxay go'aansatay inay soo saarto MacBook Pro M1 cusub oo leh cabbirro kale. Waa inaan sugno, waxay u badan tahay inaan yeelan doonno Keynote inta lagu jiro usbuuca ugu horreeya ee Sebtember markaa wax yar baa dhiman. Kuwani waa kaliya diiwaanada, waxa cad ayaa ah in mashiinada lagu bilaabayo aaladaha cusub ay durba shaqeynayaan. Adiguna, Maxaad aad u jeceshahay inaad aragto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay diiwaangelisaa lix nooc oo cusub oo Apple Watch ah guddiga Eurasia